Waa maxay? Xidid, sudo, iyo kuwa kale ... | Laga soo bilaabo Linux
70 | | Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Waa salaaman tahay, ku soo dhowow qoraalkeyga cusub ka dib musiibadii Kubuntu Distroview. Maanta waxaan ka wada hadli doonnaa waxa xididka iyo wax kasta oo la xiriira. Hagaag waan bilownay…
5 Qalabka Root Anti-RootKits
Magaca xidid Waxay dib u bilaabatay Unix. Labadaba gudaha Unix sida GNU / Linux waa isticmaalaha rukhsad badan, ama kuwa ka yimid Windows waxay u dhigantaa 'Maamulaha'.
Isticmaalahan ayaa leh rukhsad uu ku aqriyo, ku qoro kuna fuliyo codsi kasta oo nidaamka ah. Si ka duwan Windows, xididku maahan isticmaale laga heli karo a, dheh, 'Deegaanka Sawirka'.
Caadi ahaan waxaa laga helaa isticmaale kasta adoo gelinaya terminaalka (konsole, qolof, bash):
Markaad gelineyso furaha ereyga waa inaad ka baxdo:
Amarka sudo badanaa wuxuu sameeyaa wax sidan oo kale ah (xD):
Hadda si dhab ah, waxaa loo isticmaalaa in lagu 'jilo' terminal (konsole, qolof, bash) inaad tahay isticmaale asalka ah. Waxay ka badan tahay ama ka yar tahay 'Fur sida ...' ee Windows.
Ilaa aad rabto inaad xididdo muddo dheer, isticmaal sudo -s (kor ayaa lagu baray). Si aad u maamusho codsiyada, waxaa loo sameeyaa sida soo socota:
sudo [Nombre de el Programa]
Su (Ingiriis ahaan scusstitute uahaansho) Waxaa badiyaa loo isticmaalaa in lagu beddelo isticmaale ku jira boosteejada (sidoo kale waxay u shaqeysaa a xidid).
Waxaa jira laba qaab oo loo isticmaalo Su.
su [Nombre de Usuario]
Iyo, midka sameeya isla sida sudo -s:
RootKits mararka qaarkood waa qalab xun. Sida laga yaabo inaad ogaatay, waxay u adeegaan inay ka dhigaan nidaamka inay aaminaan inaad xidid tahay oo aad maamusho wax walba (xitaa fayrasyada) iyaga oo aan weydiisan lambarka sirta. Tani waxay si weyn u fududeeysaa saameynta fayrasyada.
Qalabka Root Anti-RootKits
Si aad u aragto haddii ay jiraan RootKits-ka diskiga, waxaa jira aalado badan oo lagu xusay boostada saaxiibkeen ee elav. Hubi haddii aad hayso wax RootKit ah
Hagaag qoraalkani halkaan ayuu ku egyahay, waxaan rajeynayaa inay kaa caawin doonto inaad fahanto xasiloonida weyn iyo amniga Linux. Ilaa waqtiga xiga!
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Waa maxay? Xidid, sudo, iyo kuwa kale ...
Qoraal aad uxog badan, salaan iyo sii wad 😀
xidid haddii ay ku heli karto jawi garaaf ah, in kastoo aan lagu talinayn haddii ay suurtagal tahay.
Waxaad u jeeddaa inaad riixdo Alt + F2 iyo sanduuqa wada hadalka nooca "gksu program_name" (Gtk) ama "kdesu program_name" (KDE)?
Waxaan u maleynayaa inay macnaheedu tahay in koontada asalka ahi ay marin ka heli karto deegaanka garaafka ah in kasta oo aan lagu talin karin.
Dhinaca kale, waxaad sheegtey, waxaa jira waqtiyo codsiyada qaarkood loo baahan yahay in loo furo 'xidid' deegaanadooda garaafka, tan awgeed kdesu (ama kdesudo in Debian) iyo amarrada gksu ayaa la adeegsadaa.
marka aad gasho waxaad isticmaashaa isticmaalaha asalka ah halkii aad adigu isticmaali lahayd.
qaar ka mid ah distros ma ogola.
Xaaladda Debian, ma geli kartid asal ahaan.
Gordon freeman dijo
Roll X (Ctrl + Alt + F3) wuxuu ku bilaabmaa asal ahaan, iyo ...
Waxay iiga shaqeysay waxyaabo badan.
Jawaab Gordon Freeman
Isla wixii aan dhihi lahaa haddii si garaaf ah loo marin karo, in kastoo aan lagu talin. GDM iyo KDM waa la xadiday asal ahaan, laakiin waa la qaabeeyey (In kasta oo aanu caqli lahayn).
Sidaad u sheegtay waxaad kaliya u baahnaan lahayd inaad fuliso ALT + F2, ku soo gal xididka kadibna "Startx", taasi waa taas, waxaad bilaabi doontaa jawiga garaafka.
CTRL + ALT + F2 waan ka xumahay, si aan u bilaabo qunsuliyada tty kale.
Waxaan ula jeedaa waxaad ku bilaabi kartaa fadhiga xididka oo waxaad isticmaali kartaa jawi garaaf ah
Mid ka mid ah kuwa gaagaaban, laakiin faa iido iyo macluumaad xambaarsan, aad u fiican.
Ma jecli sudo, runti waligey kuma rakibi xD waxaad tahay ama ma dhiman kartid, laakiin majiro dhexdhexaadiyeyaal xD
Way kafiican tahay inaad kubilaabto kalfadhiyada isbadalada kujira
$ aad -
hehehehe memes weyn, salaan!
Qoraal aad u wanaagsan!
Laakiin uma baahni inaan dhaho OS X wuxuu adeegsadaa sudo.
Qore: Dr. Gordon Freeman.
Maqaalkaas qosolka ahi waa nuqul qafiif ah oo fikradda asalka ah ee Xkcd: /
Maadeysku maahan fikradda dhexe ee maqaalka, waa sidaas? 🙂
Dabcan maya, laakiin haddii ay dhigayaan majaajilo ah 1/3 ee maqaalka, waxay soo jiidanaysaa dareenka haddii asalka sidoo kale la yaqaan 🙂
Boostada wanaagsan 😉
Waxaan hayaa dhowr waxyaalood oo aan tilmaamo.
1) In kasta oo awoodda adeegsadaha asalka ah badiyaa laga isticmaalo terminalka, ama caado ahaan ama sababtoo ah waxaan nahay xoogaa jimicsi, waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa deegaanka garaafka. waad dhaqaajin kartaa faylasha, tirtiri kartaa iwm asal ahaan haddii aad bilowdo maareeyaha faylka sida super user
[koodh] sudo nautilus [/ lambar]
barnaamijyada kale sida synaptic iyo gparted sidoo kale waxay u baahan yihiin xidid. way ka sii badan tahay haddii xusuustu i khasaarin waxaa suurtagal ah in la bilaabo dhammaan DE (desktop envirionment) xidid ahaan.
2) qolofku lama mid aha terminal ama konsole
3) in tafatiraha qaar saxo higgaadda fadlan
Salaan. rakibi serverka ubuntu 14.04 LTS 32 waxoogaa. anigoo isku dayaya inaan wax ka barto Linux-ka anigoo ka faa'iideysanaya faallooyinka aan ka helay internetka laakiin maanta dhibaato ayaa i soo food saartay ma garanayo sida loo xaqiijiyo haddii CDROM-kayga la awoodo (Linux ayaan ka soo rakibay CDROM-kayga) Waxaan isku dayayaa soo ogow sida aan ku ogaan karo haddii akhristahaygu firfircoon yahay iyo sida aan ku xaqiijin karo tan (CDROM-kayga waa IDE)